Tonga ny tsingerin-taona fahadimy an'ny iPad! | Vaovao IPhone
Tamin'ny andro toy ny androany dimy taona lasa izay dia naseho ny iPad, ilay efijery kely kely izay niaraka tamin'ny fotoana fialamboly sy fiasantsika hatrizay ary izay mihoatra ny iray dia lasa fitaovana ilaina tokoa. Manantona anay amin'ny tsingerintaona fahadimy an'ny iPad amin'ny dia amin'ny alàlan'ny tantarany, ny fivoarany, ny plus ary ny minus.
1 Ary tonga ny iPad
2 iPad 2 - Tonga eto izy io
3 Fahendrena ny fanitsiana - iPad Retina, iPad 4 ary iPads Mini
4 Manify mihoampampana, fampisehoana miavaka - iPad Air 1 sy 2
Ary tonga ny iPad
Araka ny fantatra dia tetik'asa lehibe foana an'i Steve Jobs izy io, hany ka mialoha ny iPhone ny famolavolana sy ny projet azy, saingy ny fetran'ny teknolojia no nanakana ny takelaka Apple tsy handeha ho eny an-tsena alohan'ny iPhone. Araka ny nahazatra antsika dia i Steve no nanolotra ny iPad tamin'ny 27 Janoary 2010 ho toy ny symbiosis eo amin'ny iPhone sy ny Macbook. matanjaka kokoa, lehibe kokoa ary ilaina kokoa noho ny iPhone. Hatramin'izay dia toy izao sy ny faneken'ny besinimaro fa io no loharanom-barotra faharoa amin'ny Apple ankehitriny.
iPad 2 - Tonga eto izy io
Nalefa tamin'ny volana martsa 2011, ny fivoaran'ny voalohany ny iPad dia eto, ary raha ny marina dia niaraka taminay hatramin'ny androany. Fitaovana manify sy tsara kokoa no revolisiona lehibe indrindra teo amin'ny iPad mandra-pahatongan'ny fahatongavan'ilay iPad Air 2 misavoana. Ny fanavaozana ny fitaovana dia nanokatra varavarana ho an'ny fahafaha-manao zavatra maro hafa, tonga tamin'ny endrika boribory sy manify kokoa (33% manify noho ny teo alohany), nohatsaraina bateria sy processeur ary niaraka tamin'ny Smart Covers.
Raha ny marina dia miaraka amintsika ny fanahiny mandraka androany raha toa ka heverintsika fa manana fitaovana mitovy amin'ny iPad Mini izy.
Fahendrena ny fanitsiana - iPad Retina, iPad 4 ary iPads Mini
Tonga ny iPad Retina, fanontana fahatelo amin'ny takelaka Apple izay nampanantena azy ireo ho sambatra, hoy izahay fa nampanantena azy ireo izy ireo satria ny fanapahan-kevitra retina sy ny fitomboan'ny fitaovana dia toa manaraka ny tsipika nomen'i Apple an'ireo fitaovana ireo, saingy nisy zavatra tsy nety, ireto iPads indraindray tsy nanao araka ny nandrasana ary ny faharetany fohy eny an-tsena (namoaka ny iPad 4 fotsiny i Apple enim-bolana taty aoriana) dia nilaza fa misy zavatra hafahafa mitranga. Ho fanampin'izay, ity iPad vaovao ity dia tonga niaraka tamin'ny processeur sy fakan-tsary vaovao, namerina ny iPad tany amin'ireo elit tablette, izay tsy tena nivoaka mihitsy.
Ny fampidirana ireo mpampifandray amin'ny Lightning vaovao dia nahazo fanakianana ihany koa, tsy manadino ireo charger sy tariby iPad izay navotsotra enim-bolana talohan'izay.
Ny fampidirana ny vaovao Ny elanelan'ny Mini iPads dia tsy nisy adihevitra ihany koa., Nihevitra ny ankamaroan'ny besinimaro fa very ny antony nahatonga ny iPad hanana habe kely (7'9 santimetatra), ho fanampin'izay, tsy niaraka taminy koa ny fitaovana. Nanomboka teo ny iPad Mini dia niovaova tamin'ny fampitaovana tamin'ny antsasaky ny fitanana sy ny fihoaram-pefy, nefa tsy naharesy lahatra toa azy ny iPad Air. Mazava ho azy, ny iPad Mini miaraka amin'ny fandraisana tsara indrindra dia ny andiany faharoa, miaraka amin'ny fitaovana mitovy amin'ny an'ny iPad Air ary tsy isalasalana fa mahafaly ireo izay mahita ny haben'ny kinova mahazatra ho be loatra.
Manify mihoampampana, fampisehoana miavaka - iPad Air 1 sy 2
Tonga ny Oktobra 2013, ary miaraka aminy ny Air range, ny icing amin'ny mofomamy ao amin'ny fitaovana iray izay mihombo ary tsy misy fifaninanana. Manify, maivana ary miaraka amin'ny fampisehoana tsaratsara kokoa. Amin'ny hatevina 7,5mm ihany ny iPad Air dia napetraka ho takelaka manify indrindra eny an-tsena, miaraka amin'ny zana-kazo tery kokoa ary lanja mavesatra 469 grama (40% ambany noho ny iPad 4). Mandritra izany fotoana izany dia nanomboka fampisehoana retina ny iPad Mini.
Tsy isalasalana fa ny fahatongavany koa dia nitarika ny fanambarana iPad tsara indrindra hatramin'izao.
Avy eo dia hitantsika ny andiany faharoa amin'ny laharan'ny Air, 18% manify kokoa noho ilay teo aloha (tsy azo atao intsony), miaraka amin'ny teknolojia manohitra ny taratra sy fitaovana iray izay mahafaly ny mitaky be indrindra, ary mazava ho azy, ny fampiharana ny Touch ID malaza. Ilay takelaka voafaritra mandra-pahatapitry ny fahagagan'ny Apple antsika indray.
Ary manana taona maro!
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » Tonga ny tsingerin-taona fahadimy an'ny iPad!
Manana ipad mini aho (ny voalohany) ary tena mahazo aina amin'ny habeny aho satria ampiasaiko ho toy ny finday avo lenta ary entiko na aiza na aiza. Raha nanana iPad feno habe aho dia tsy hanana fahalefahana entina mivezivezy. Ny filalaovana mini ihany koa dia mora kokoa satria azoko atao ny milalao azy eny an-tanako ary tsy mila apetraka eny ambonimbony aho. Mazava fa ny sarimihetsika dia mety ho tsara kokoa amin'ny iPad. Raha nanana iPhone 6+ aho dia te hanana iPad mahazatra. Raha tsy izany dia aleoko ny mini iPad.
PS: iPad no takelaka tsara indrindra !! isalasalana fa